कसैको साथ बिना यसरी लड्यो ताइवानले कोरोनासँग, यसबाट नेपालले सिक्ला ? - Jhilko
काठमाडौं । अहिले विश्वभरि महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरस चीनको समुुन्द्रतटको दक्षिण पूर्वीय भागमा रहेको ताइवानमा पहिलो पटक संक्रमण २१ जनवरीमा देखिएको थियो । संयोग नै भन्नुपर्छ अहिले कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बन्दै गएको अमेरिकामा पनि पहिलो संक्रमित २१ जनवरीमा नै पुष्टि भएको थियो ।
चीनले महामारीको सत्य सूचना लुकाएको आरोप लगाउँदै ताइवानी राष्ट्रपति साई ईङ्ग वनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सत्य तथ्य सूचना पाउनुपर्ने माग राख्दै आएकी थिइन । १९३ देश सदस्य रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनमा भने २०१६ यता ताइवानलाई रोकिएको छ ।
करिब दुई करोड ४० लाख जनसंख्या रहेको ताइवानमा सक्रमणको संख्या अहिले चार सय जति रहेको छ । उस्तै जनसंख्या रहेको अर्काे टापु देश अष्ट्रलिया जुन पहिलो इपिसेन्टर भएको चीनको हुवानबाट सात हजार किलोमिटर पर रहेको छ, त्यहाँ संक्रमित संख्या पाँच हजारको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । एकैदिन पहिलो संक्रमित देखिएको अमेरिकामा अहिले ३ लाख भन्दा धेरै संक्रमति छन् ।
महामारीबाट बच्नका लागि ताइवाले केही कठोर निर्णयहरु गर्नु परेको थियो । जनवरी २३ मा उसले वुहानको बासिन्दालाई आफ्नो देश प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि उसले जो कोही चाइनिज आफ्नो देश प्रवेश गर्न चाहन्छन् भने हेल्थ सर्टिफिटेक अनिवार्य रुपमा लिएर आउन पर्ने बनायो ।
फेब्रुअरी–६ बाट सबै चाइनिज नागरिकलाई ताइवान प्रवेशमा प्रतिवन्ध लगायो र सबै अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजलाई पनि त्यही दिनबाट रोकेको थियो ।
त्यस्तै होम क्वारायटिनलाई पनि कडा गर्न आदेश जारी गरियो । हेलचेक्र्याँई गर्नेलाई दश हजार अमेरिकी डलरसम्मको जरिवाना तिर्न लगायो ।
त्यस्तै एकैदिन ५० लाखसम्म मास्कको उत्पादन गरियो । जो कोहीलाई पनि निमुनिया जस्तो लक्षण देखिएमा टेस्टिङ र रि–टेस्टिङ गरियो । यसरी दिनमा १३ सयसम्म टेस्टिङ र रि–टेस्टिङ गरिएको थियो ।
त्यस्तै कोरोना भाइरसको गलत समाचार प्रकाशन गर्ने मानिस या मिडियालाई एक लाख अमेरिकी डलरसम्मको जरिवाना तिर्न पर्ने व्यवस्था बनाइयो । ताइवान सरकारले कोरोनाबाट क्षति भएको व्यवसायको लागि भनेर दुई अर्ब अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको थियो । कोरोना भाइरसको कारण प्रभावित बनेका मजदुरहरुको लागि महिनाको छ सय ३० डलर दिने व्यवस्था गरियो । सार्वजनिक स्थलहरुमा किटनाशक औषधिहरु छर्किने काम गरियो ।
यसरी लकडाउन विना र विश्व स्वास्थ्य संगठनको साथ विना ताइवान सबै विश्वको लागि उत्कृष्ट उदाहरण बन्न सकेको छ ।
यस्ता सकारात्मक विधिलाई नेपालले सिक्ला ?
नेपालमा माघ ९ गते कोरोनाको संक्रमण भएपछि चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गर्ने वाहेक अरु कुनै तयारी, विधि बनाएको छैन । कोरोना संक्रमणलाई फैलन रोक्न, संक्रमण पत्ता लगाउने गतिशील उपचार पद्धति नै छैन ।
आफ्नै देश अमेरिका फर्किए सरोज खनाल
मालपोत कार्यालय नासु घुस सहित समातिए
सेवाग्राहीबाट रु ४० हजार घुस लिएको आरोपमा भूमि सुधार शाखाका नायब सुब्बा वासुदेव...
देशभर वर्षा, विपी राजमार्ग अबरुद्ध, लमजुङमा बाढीले पुल...
मौसमविदहरूले शुक्रबार देशभर विभिन्न स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना भएकाले...